Barteyaalka Af Ingiriisiga (ELL) - Des Moines Public Schools
Ku soo Dhawada Iskulka Guugd ee Des Moines
Barteyaalka Af Ingiriisiga (ELL)
Waxaa jira in ka badan 80 luqadood oo lagaga hadlay guryaha ee uu ka samaysan yahay Iskulada guud ee Des Moines. Degmadu waxay u adeegtaa ku dhowaad 5,800 ardayda English Language Learner leh 138 macalimiin ka go’an iyo dhaqaalaha iyo shaqaalaha , oo ay ku jiraan shaqaalaha outreach luqo 43 goobood oo kala duwan oo bulshada oo dhan.
Hadafyada barnaamijka ELL waa:
Si aad u baraan Barteyaalka Af Ingiriisiga si isku mid heerka manhaj sida ardayda oo dhan ee degmada halka ay gaareyn ujeedooyinkooda af Ingiriisi ah xagga dhegeysiga, ku hadalka, akhriska, iyo qoraalka.
Si kor loogu qaado aqoonsiyo luuqad iyo dhaqan ardayda , joogteeyo dhaxalka dhaqanka, oo diyaariyal u ah si firfircoon uga qayb gataan bulshada ardayda Maraykanka.
Si loo hubiyo in nidaamka waxbarasho ee waa dadaalka iskaashi ka dhexeeya guriga iyo dugsiga; abuurto fursado qoysaska , bulshooyinka , iyo shaqaalaha DMPS.
Waxaa sii kordheysa ardayda labada luqadood ee Des Moines , mid ka mid ah calaamadaha cabbirka ee dugsiyada fasalka. Barnaamijka ELL waxa uu ku dadlayaan inay bixiyaan adeegyada iyo barnaamijyada ugu fiican si loo daboolo baahida ardayda iyo qoysaskooda ELL.
Haddii aad qabto su’aalo ku saabsan barnaamijka ELL ama aad jeclaan lahayd macluumaad dheeraad ah , fadlan la xiriir Xarunta Welcome dugsiga degmayed adigoo wacaya 515-242-8102 ama booqanaya 1301 2nd Avenue.